About Us - Shenzhen Khazimla Technology Co., Ltd.
I-Radiant inyanzelisa "isenzo sithetha kakhulu kunamagama" njengefilosofi yayo. Umenzi wobuchwephesha be-LED, iRadiant yasekwa ngo-2007 ngenkunzi ebhalisiweyo engaphezulu kwe-RMB10 yezigidi, kwaye inendawo yokusebenza ye-3000sqm okanye i-30,000 sf eLilan Technology Park kwiSithili saseGuangming. Ukususela ekuqaleni kwayo, iRadioant ikhule ngokukhawuleza. Iimveliso eqaqambileyo ziye zafikelela kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nemimandla ...
Ukusebenza nzima kunye nokuyila, besisebenzisa ubuchwephesha obuphambili kunye nokwenza izinto ezintsha ukuvelisa iimveliso ezisemgangathweni. Siphatha yonke iodolo ngokucokisekileyo kangangoko kunokwenzeka. Ukufezekisa iimveliso zethu, singenisa ezona zixhobo zihambele phambili zokuvelisa kunye novavanyo lokugcina umgangatho ongqongqo womgangatho kuyo yonke imveliso. Ngemizamo yokudibanisa, iimveliso zethu ziye zamkelwa kwaye zafumana izatifikethi ezininzi, ezinje nge, CE, CCC, FCC imvume njl.
Imveliso esemgangathweni eqaqambileyo yemveliso ibambelela ngokungqongqo kwinkqubo yokuqinisekiswa kwe-ISO9001- 2015 kunye nomgangatho wolawulo we-7S. Ukufuna ukugqibelela okukhulu kunye nefuthe elinzulu ekubekweni komgangatho kwishishini le-LED, siyathembisa kubo bonke abathengi ukuvavanya iodolo nganye kunye nengxelo. Masisebenzisane, kwaye "sibonise ubuhle behlabathi" njengemishini yethu, ukwenza ikamva elinemibala eqaqambileyo.
I-CE-EMC (Iimveliso eziqhelekileyo)
I-CE-LVD (iiMveliso eziMiselweyo)
I-CE-EMC (iLed Screen ekhanyayo)
CE-LVD(Transparent Led Screen)
Magnetical module tecgnology for transparent LED display